Wiko Lenny3 Max, sihlalutya enye indlela ebalaseleyo yeWiko | Iindaba zeGajethi
Wiko Lenny3 Max, sihlalutya eyona ndlela imangalisayo yeWiko
Sibuyela kumthwalo kunye nohlalutyo lwesixhobo esiphakathi, kuba sinikwe iimeko zentengiso yangoku, ngaphandle kwamathandabuzo zii-smartphones ezandisa kakhulu ezipokothweni zabo bonke abasebenzisi. Kwakhona inkampani yaseFrance i-Wiko ifuna ukuthimba abasebenzisi abangathathi sigqibo kwaye incinci inikwe ukuchitha isixa esikhulu semali kwiselfowuni, kwaye kubo banenye into ebonakala ikakhulu kwezona mfuno ziphambili zolu hlobo lwabaphulaphuli: ukuzimela, isikrini esikhulu kunye nomzimba oxhathise ixesha elide.
Lo nto, usebenzisa indlela yohlalutyo olufanayo njengesiqhelo, Siza kujonga ukuba zeziphi ezona mpawu ziphambili zale fowuni ephathekayo ngokubeka amandla kunye nobuthathaka bayo etafileni, kwaye sithathe isigqibo sokuba ingafunyanwa okanye ingacetyiswa kangakanani ukufunyanwa kwayo. Ngendlela efanayo, sicebisa ukuba uphonononge esikwenzileyo kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ze-Wiko Ufeel Prime, ifowuni uWiko afuna ukuyinkcinkca kweyona ndawo ifunwa kakhulu yi-Android. Ke, masiye apho, kwaye ukuba ufuna ukuya ngqo kwicandelo lobuchwephesha lesixhobo, sicebisa ukuba usebenzise isalathiso esisishiya ngaphezulu.
1 Uyilo lweWiko Lenny3 Max
2 Isikrini kunye neekhamera zeWiko Lenny3 Max
3 Izixhobo zekhompyuter ngokubanzi zeWiko Lenny Max3
4 Ukuzimela ngeflegi kunye nokunxibelelana ngaphandle kokuqhayisa
5 Izigqibo emva kokusebenzisa uWiko Lenny Max3
Uyilo lweWiko Lenny3 Max
Inkampani yaseFrance iphinde ibhenele kuyilo lwayo olwaziwayo, ubungangamsha kwangaxeshanye njengobungangamsha bokunika ubuntu kwisixhobo esinexabiso elinokhuphiswano olukhulu, kodwa oko akuyibhengezi kwimimoya emine. Kungenxa yoko le nto ngasemva sifumana i-chassis enye ngaphandle kotshintsho kuyilo olungaphaya kwelogo yenkampani, inzwa yekhamera esemva kunye nefleshi ehamba nayo. Emazantsi ngasemva, ngaphandle kokufikelela emaphethelweni kunye nokuphela kwendawo yesinyithi, sifumana imilinganiselo ehambelana nesithethi sefowuni.
Into esingenakuyihoya yile uninzi lwangasemva lwesixhobo lwenziwe ngealuminium. Kwelinye icala, ukubonelela ngokuchaseneyo nayo, ngelixa siphucula ukusebenza kwesigubungelo, sifumana indawo ezimbini zeplastiki ezinombala ofanayo ne-aluminium, oko ke kuthintela ukukrwela emacaleni ngempembelelo. Ayikho enye into esiya kuyifumana ngasemva.
Kwelinye icala (ekunene) siya kuthi fumana amaqhosha okwandisa nokunciphisa ivolumukunye neqhosha lokutshixa. Ngelixa kwinxalenye engaphambili siza kuba nokufumaneka kwepaneli emnyama enamaqhosha amathathu asezantsi emazantsi, icandelo eliphezulu lifakwe kwikhamera engaphambili, kwimakrofoni nakwisenzi sokuziva esikufutshane. Ngaphandle kwamathandabuzo asijonganga naliphi na iqhosha ngokwendlela yoyilo, kwaye alwenzi ngathi.
Apho kubonakala khona uWiko Lenny3 Max kuluhlu lwemibala engasemva asinika yona, sinoluhlaza okotshani obumnandi kakhulu, kunye negolide ye-champagne kunye nepinki ekhanyayo. Ewe, ezona zakudala ziya kuba nakho ukufikelela kuguqulelo olupheleleyo lube mnyama. Inqaku elibi kukuba ukhetha umbala okhetha umbala, Kuya kufuneka ulungiselele ipaneli emnyama emnyama. Kukwaphawuleka ukungabikho kombala wesilivere ngombala omhlophe, phantse njengodidi njengombala omnyama.
Isikrini kunye neekhamera zeWiko Lenny3 Max
Siqale ngecandelo lobugcisa, kuba siyazi ukuba yile nto kanye ofuna ukuyazi. Iifransi zaseFransi zibheja kwakhona kwipaneli engaphambili ye-intshi ezintlanu, ngeli xesha kwisisombululo se-HD. Siphosa isisombululo esincinci apha, izixhobo ezininzi ezisezantsi sele zibonelela ngeepaneli ezipheleleyo ze-HD ngokungafaniyo nale paneli. 5 intshi HD (1280 x 720 pixels) kunye nemibala ezizigidi ezili-16, zizonke 294 PPINangona kunjalo, kufuneka sihlale sithathela ingqalelo uhlobo lwemveliso esiyifumanayo, kwaye ukuyibuyekeza isinika ipaneli enetekhnoloji ye-IPS eya kusivumela ukuba sandise uluhlu lwemibono, kunye nokuqaqamba okunamandla ukuya kuthi ga 400 nits Ayizukusinqanda ekutyeni umxholo nokuba selangeni.
Kwikhamera engasemva, kwakhona ngaphandle kokuqhayisa Inzwa ye8MP Esingamaziyo umenzi wayo, kodwa sicinga ukuba ikwayiloo nto izixhobo ezininzi ezisezantsi ziphakama kwaye oko kunika iziphumo ezingummangaliso. Kwelinye icala, bahlawula kwinqanaba lesoftware ngokufota kwe-panoramic, isihluzo se-selfies, i-HDR kunye nesikrini esikwi-flash. Isibane esingasemva siyi-LED emhlophe emhlophe emhlophe. Ngokuphathelene nokusondeza, sinezonyuso ezine ngokwamanani ngokunjalo. Sinakho ukurekhoda ividiyo kwisisombululo se-FullHD (1080p) ukuya kuthi ga kwi-30 FPS.
Kwelinye icala, ikhamera yangaphambili, eyilelwe iiselfie, iyasinika 5MP, ngaphandle kweflash kunye neempawu ezifanayo zesoftware. Ifleshi yesikrini iya kuba ngaphezulu nje ngokwaneleyo ukusisusa endleleni kwiimeko eziphantsi zokukhanya. Enye into ebalasele ngayo ngaphambili iglasi egosogoso emaphethelweni, iklasi eyi-2.5D.
Izixhobo zekhompyuter ngokubanzi zeWiko Lenny Max3
Kwakhona uWiko uthatha isigqibo sokubheja kwiiprosesa eziphakathi kunye nezisezantsi ImediaTek Quad Core A7 1,3GHz ngenjongo yokuphucula ukusetyenziswa kunye nokuzimela, oko kukhapha ixabiso elihlengahlengisiweyo. Ukuhamba nomprosesa sine-2GB ye-RAM, ezibonisiweyo yanele ukusetyenziswa kwesiqhelo kunye nokuqhelana nefowuni ephathekayo, esivumela ukuba sihambe ngaphandle kweengxaki, sisebenzise umxholo kwiYouTube okanye sisebenzise ezona zinto ziphambili zokuthumela imiyalezo kwangoko kunye nenethiwekhi. Ngokucacileyo ukusikelwa umda kuya kufumaneka kwinqanaba lokwenziwa kwezicelo ezinzima, ezinje ngokuhlelwa kweefoto okanye, umzekelo, eyona midlalo yevidiyo inzima netekhnoloji ye-Unreal, ngaphandle kweprosesa yayo yemizobo I-ARM Mali 400MP.
Ngokumalunga nokugcinwa, iWiko Ityalwe kwi-16GB yokugcina kwangaphakathiokanye kwimemori yesixhobo, enokwandiswa ngokulula ukuya kuthi ga kwi-80GB ukuba sithatha isigqibo sokongeza ikhadi I-64GB ye-MicroSD (ubuninzi buxhaswe) kwicandelo lekhadi. Oku kuyasivumela ukuba sibenendawo eninzi yokulawula kunye nokuqhuba zonke iintlobo zezicelo kunye neefayile.
Ukuzimela ngeflegi kunye nokunxibelelana ngaphandle kokuqhayisa
Enye yamandla ayo kwaye oko kusishiye simangalisiwe yindlela engenzi nto ngayo Ngaphantsi kwe-4.900 mAh ibhetri, iintsuku ezimbini zokusetyenziswa okunzima ngaphandle kokuphazamisaUkuqhuba usetyenziso oluphambili lwemiyalezo. Isinika ephepheni kungekho ngaphantsi kweeyure ezingama-480 zokuphumla. Ngokucacileyo eli nqaku liqinisekileyo malunga nokuzimela liba yingxaki ngokobunzima, sifumana ubunzima bebonke I-177 gram, Ngobukhulu obuyi-143 x 73 x 9,9 millimeters, lixabiso lokuhlawulela ukuzimela ngenkohlakalo njengale inikezelwa yile Wiko Lenny3 Max.
Ngokumalunga nokunxibelelana, Siza kuphoswa kukufikelela kwisantya esiphezulu senethiwekhi ye4G-LTE, kuba i-eriyali yayo ayihambelani, kodwa inethiwekhi yesiqhelo ye-3G. Ukubuyekeza isithuba sekhadi, kusivumela ukuba songeze ii-SIM khadi ezimbini ukuze sikwazi ukukhetha phakathi kweenkampani esizithandayo. Uqhagamshelo lwe-HSPA + luya kufikelela kwi-21 Mbps ukunyuka nokuhla, nto leyo engalunganga nayo. Kwiindawo eziqhelekileyo zokugubungela asiphoswa kukudityaniswa kwe4G konke konke kwaye isebenze kakuhle.
Olunye unxibelelwano esinalo I-WiFI 802.11 b / g / n ngomda obalulekileyo, Bluetooth 4.0 umthamo wesitiriyo I-USB-OTG kwaye musa ukuhambisa imveliso 3,5 mm jack, abafana baseWiko bacinge ngayo yonke into. Unxibelelwano IGPS ukuze sikwazi ukuhamba ngaphandle kwazo naziphi na iingxaki sikhatshwa yile Lenny3 Max.
Izigqibo emva kokusebenzisa uWiko Lenny Max3
Kufuneka sihlale sijonga uhlobo lwesixhobo esisifumanayo, iWiko Lenny3 Max isixhobo esimnandi esiphakathi / esisezantsi eya kuba nakho ukwenza imisebenzi yemihla ngemihla. Ifowuni eyilelwe ukuba sihlale sinxibelelana neyethu kwaye sisebenzise umxholo ngokukhawuleza nangokulula. Ngokuchasene noko, sifumana izixhobo ezinqongopheleyo kwimicimbi enjengokusonjululwa kwescreen okanye iikhamera zangasemva nangaphambili, izinto ezinokuthi zithathe isigqibo ukuba asithatheleli ngqalelo ixabiso elifanayo.
I-Lenny3 Max evela eWiko yiyo ukhetho lokuthatha ingqalelo Njenge-Smartphone yokuqala yowona mncinci wendlu, ibonakaliswa ngokuba yomelele kwaye inganyangeki, ngaxeshanye uluhlu lwemibala kunye nezinto zayo ziya kukwenza ungathandabuzi ekuqaleni ukuba ujonge isixhobo selo xabiso.Unokuyithenga apha.
Ngamafutshane, Sijongene nenye into enehardware eyaneleyo, izinto ezinganyangekiyo kunye nokuzimela okukhulu, eya kuthi ngokuqinisekileyo ibambe uluntu olungenabunzima kangako ngobuchule befowuni, njengoko ihlangabezana neemfuno ezisisiseko zomsebenzisi wanamhlanje.
UWiko Lenny Max3-Uphononongo
Isiciko sangasemva kodwa ibhetri engenakususwa
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Wiko Lenny3 Max, sihlalutya eyona ndlela imangalisayo yeWiko
INokia 9 iyavuza kwi-Intanethi kwaye ijongeka intle kakhulu